कथा कोरोनाको : भाइरसको चाल र ताल देखेर वैज्ञानिकहरु पनि अचम्ममा « News24 : Premium News Channel
कथा कोरोनाको : भाइरसको चाल र ताल देखेर वैज्ञानिकहरु पनि अचम्ममा
एजेन्सी, २० जेठ । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि वैज्ञानिकले कोरोनाबारे एक अचम्मको तर एकदमै चिन्ताजनक कुराको प्रमाण पत्ता लगाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको शिकार हुने धेरै मानिसहरुमा खोकी, ज्वरो, स्वाद र गन्धको थाहा नपाउनेको लक्षणहरु देखिएको छ । तर यस्ता त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरु प्नि फेला परेका छन्, जसमा त्यस्ता कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन तर कोरोना भेटिएको छ ।
पछिल्लो समया पत्ता लगाएको नयाँ संक्रमित धेरै व्यक्तिहरूमा कुनै पनि पहिलाको देखिदै आएको लक्षणहरू पाएको छैन । र यस कारण तिनीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ भनेर थाहा पाउन मुस्किल परेको जनाइएको छ ।
परीक्षण नहुँदासम्म उनीहरुमा कोरोना भएर पनि नभएको जस्तो देखिन्छ । मानौं कुनै व्यक्तिले आफ्नो खल्तीमा बम राखेको छ र उसलाई यो थाहा छैन। कोरोना भाइरसको अनुसन्धानले संसारमा कति जना व्यक्ति भाइरसले संक्रमित छन् भनेर पत्ता लगाउन नै गाह्रो भएको बताएका छन् ।
कतिपय मानिसहरुमा बाहिरी कुनै किसिमको लक्षणहरु नदेखिएपछि रोग पत्ता लगाउनु एकदम मुस्किल भएको हो । मौन रुपमा वा गोप्य रूपमा फैलिएको भाइरसहरूले महामारीको दायरा बढाउँदै गएको अनुसन्धानले जनाएको छ ।
मौन रुपमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको कुरा सबै भन्दा पहिला सिंगापुरका एक डाक्टरले पत्ता लगाएका थिए । यो जनवरी १९ मा थाहा भएको हो । सिंगापुरको एक चर्चमा मानिसहरु प्रार्थनाका लागि जम्मा भएका थिए । उनीहरुलाई थाहा थिएन कि यस प्रार्थना बैठकले सारा विश्वमा कोरोना भाइरसको फैलावटलाई असर गरिरहेको छ।
त्यो दिन आइतवार थियो। चर्चको कुनै पनि सामान्य प्रार्थना सभा जस्तै, मन्डारिन वा चिनियाँ भाषामा पनि सेवा सञ्चालन भइरहेको थियो। द लाइफ चर्च एण्ड मिशन्सको प्रार्थना यस भवनको तल्लो तलामा भइरहेको थियो।
त्यसमा श्रीमान र श्रीमती पनि थिए जो एका बिहानै चीनबाट सिंगापुर आएका थिए। दुबै जना ५६ बर्षका थिए । उनीहरु चर्चको सभामा उपस्थित हुन आउँदा एकदम स्वस्थ देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा, उनीहरुको वरिपरि कोरोना भाइरसको घुमिरहेको छ भन्ने शंका गर्ने कुनै कारण थिएन।
रहस्यमय कोरोना भाइरस संक्रमण
यस वर्षको जनवरी महिनामा यो विश्वास गरिएको थियो कि कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो लक्षण लगातार खोक्नु हो । यस मार्फत सबैभन्दा धेरै संक्रमणहरू पनि फैलियो। अब यदि कसैलाई पनि यस रोगको कुनै लक्षण छैन भने, त्यसो भए आम मानिसले कसरी यो रोग फैलिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न पनि सक्दैनन ।
चीनबाट आएका दम्पति प्रार्थना सभामा उपस्थित भएपछि तुरुन्तै गए। तर केहि दिन पछि हालत बिग्रन थाल्यो । र, त्यो पनि धेरै रहस्यमय तरिकाबाट । सबैभन्दा पहिला, पत्नी जनवरी २२ मा बिरामी परे, प्रार्थना सभामा सहभागी भएको तीन दिनपछि।
दुई दिनपछि उनका पति पनि बिरामी भए । तर यसको एक हप्तापछि, जब अन्य तीन स्थानीयहरू पनि रहस्यमय रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमणको साथ बिरामी भए, डाक्टरहरू चकित भए। यो सिंगापुरमा कोरोना भाइरस प्रकोपको पहिलो अनौठो मामला थियो।
जब त्यो पत्ता लाग्यो कि भाइरस कसरी यी व्यक्तिहरूमा पुगेको थियो, एक धेरै डरलाग्दो तस्वीर बाहिर आयो। त्यसबेला बुझियो कि नयाँ कोरोना भाइरसले कसरी सजिलै आफैं नयाँ शिकार फेला पारेको छ।
रोगको जासूस बढाउने अभियान
सिंगापुरको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संक्रामक रोगहरूको विभाग प्रमुख भेर्नोन ली भन्छन्, हामी मानिसहरु बिरामी भएको देखेर धेरै दु खी थियौं, एक अर्कालाई नजान्ने मानिसहरूले पनि भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका थिए ।
अचम्मको कुरा यो थियो कि तिनीहरूमा रोगको कुनै लक्षण थिएन। त्यतिखेर विश्वलाई कोरोनाको बारेमा जति थाहा थियो, यी नयाँ बिरामीहरू बिरामी हुनुको कुनै स्पष्ट कारण थिएन।
त्यसपछि डाक्टर भर्नोन ली र उनका साथी वैज्ञानिकहरूले यस रोगको पत्ता लगाउने प्रहरी अधिकारीहरू र अन्य विशेषज्ञहरूसँग अनुसन्धान गर्न थाले। यी टोलीहरूसँगै कसरी भाइरस मानिसहरूमा गए भनेर विस्तृत खाका तयार गरे।
यसमा सम्पर्क ट्रेसिङको उत्तम प्रविधि प्रयोग भएको थियो। आज, बेलायतमा भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन पनि यही प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ ।
प्रत्येक संक्रमित व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन यस महामारीको क्रममा सम्पर्क ट्रेसिङ धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने यसको सहायताले संक्रमित मानिसहरूलाई बाँकीबाट अलग गरिन्छ, ताकि तिनीहरूले अरूलाई संक्रमित गर्न नसकोस ।
भाइरसको रहस्य खोलियो
अच्चम लाग्ने कुरा त भाइरस रहस्य खोलियो । अचम्मको कुरा, अर्को केही दिन भित्र, यस केसको अनुसन्धान गर्ने कम्तिमा १ सय ९१ मानिसहरूलाई भेटाए, जुन त्यस चर्चका थिए।
यस अनुसन्धानको क्रममा, पत्ता लगाइयो कि यी १ सय ९१ जनामध्ये १ सय ४२ जना आइतबारको चर्चको त्यो प्रार्थना सभामा उपस्थित थिए।
त्यससँगै सिंगापुरका ती दुई नागरिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमित भएको गोप्य कुरा पनि खुल्यो। किन कि ती दुबै चर्चको आइतबारको प्रार्थना सभामा पनि उपस्थित थिए, जसमा वुहानका चिनियाँ दम्पति सहभागी थिए ।
डाक्टर भेर्नोन ली भन्छन्, ‘हुन सक्छ सिंगापुरमा यी दुई संक्रमित व्यक्तिहरूले त्यो चिनियाँ दम्पतिसंग पनि कुरा गरेको हुन सक्छन । तिनीहरूले चर्च सेवाको क्रममा एक अर्कालाई अभिवादन गरको हुन सक्छ्न ।
यो कोरोना भाइरस को रहस्य उजागर गर्नको लागि एक धेरै उपयोगी सुरुवात थियो। र अब यो सिद्धान्तमा ज्ञात भयो कि कसरी कोरोना भाइरस संक्रमण अन्य व्यक्तिहरुमा पुग्यो?
यद्यपि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म सिंगापुरका चिकित्सकहरूले दिएका छैनन् । र त्यो प्रश्न यो हो कि जब यस चिनियाँ दम्पतिलाई भाइरस संक्रमणको कुनै लक्षणहरू थिएन, तब त्यस समयमा तिनीहरूले कसरी संक्रमन गरे।
योभन्दा पनि ठूलो कुरा यो हो कि, कोरोना भाइरस संक्रमणको साथ चर्च गएको अर्का सिंगापुरका नागरिक, प्रार्थनामा पनि उपस्थित थिइनन् । सिंगापुरका ती नागरिक ५२ वर्षकी महिला थिइन् । जुन प्रार्थना सभाको केही घण्टापछि उही दिनमा उही चर्चको अर्को सेवामा सामेल भएकी थिइन । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस यस महिलामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न थियो।
यस्तो प्रमाण जुन कसैले अपेक्षा गरेको थिएन
सिंगापुरमा कोरोना भाइरस अनुसन्धानकर्ताहरूले यस प्रश्नको उत्तर पाउन सीसीटीभी क्यामेराको रेकर्डिङ हेरे। यो आइतवारको चर्चमा आयोजित प्रार्थना सभाको रेकर्डिङ थियो। सुराग खोज्ने अन्वेषकहरूले एउटा प्रमाण भेटाए जुन यस रेकर्डिङबाट अपेक्षित थिएन।
सिंगापुरकी महिला चिनियाँ दम्पतीले छोडेर गएपछि चर्चको सेवामा भाग लिएकी थिइन । त्यस समयमा ति महिला उही सीटमा बसिरहेकी थिइन्, जहाँ वुहानबाट आएका चिनियाँ दम्पतिे केही घण्टा पहिले बसिरहेका थिए। यो स्पष्ट छ कि वुहानबाट आएका चिनियाँ दम्पतिमा कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको थिएन ।
हुनसक्छ यो भाइरस उसको हातमा थियो र उसले चर्चको सिट छोए र भाइरस त्यहाँबाट फैलियो। वा यो पनि हुन सक्छ कि भाइरस तिनीहरूको सासको माध्यमबाट भुँइमा फैलियो। यद्यपि यी अनुमानहरू हुन् । यो यस्तो गोप्य कुरा हो कि खुलापनले सम्पूर्ण विश्वमा प्रभाव पार्नेछ।
यदि यो भाइरस संक्रमित लक्षण नभएको व्यक्तिले फैलाएको हो भने उस्ले अन्जानमा नै भाइरस अन्य व्यक्तिमा पठाइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठेको छ कि, यस रोगलाई कसरी फेरि रोक्न सकिन्छ? जसमाथि वैज्ञानिकहरुखोजमा व्यस्त छन् ।